डा. केसीलाई सुविधानजनकरुपमा राख्न सर्वोच्चको आदेश - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
डा. केसीलाई सुविधानजनकरुपमा राख्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । काठमाडौँ । सर्वोच्च अदातलले वरिष्ठ चिकित्सक प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई निजको स्वास्थ्य स्थितिलाई विचार गरी अनुकूल हुने गरी सुविधाजनकरुपमा राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चासिलेको संयुक्त इजलासले आज प्राडा केसीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी सुविधाजनकरुपमा राखेर बुधबार बिहान १० बजे अदालतमा उपस्थिति गराउन आदेश दिएको हो ।
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा बयानका लागि सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका प्रा.डा. केसीको बयान लिने काम सम्पन्न भएको छ । बयानका क्रममा डा. केसीले सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा क्षेत्रमा दिएको आदेशले माफियालाई थप सहयोग पुगको बताएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सोधेको १४ प्रश्नको जवाफमा डा.केसीले अदालतले दिएको फैसलाले सुधार भन्दा पनि विकृति ल्याउने देखेर अनसन सुरु गरेको बताए ।
आपूmले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अदालतको अवहेलना हुने गरी अमर्यादित र अशिष्ट तरिकाले प्रकाशित गरेको नभई अदालतप्रति सम्मान रहेको उहनले बयानमा बताएका छन् ।
त्यसैगरी बयानमा अदालतलको अवहेलनामा सजाय हुन्छ भन्ने आफूलाई राम्ररी थाहा भएको र सही न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशलाई आफुले सम्मान गर्ने उल्लेख छ ।
असार ११ । काठमाडौँ, खेलकुदमन्त्री पुरूषोत्तम पौडेलको राखेप सदस्य सचिवमा केशव विष्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय […]
जनताको भावनाअनुरूपै संविधान जारी हुन्छः अध्यक्ष दाहाल
साउन ११ । काठमाडौँ, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने […]
नयाँ दाउमा पूर्वराजा :राजनीतिमा राप्रपा,संगठनमा शिव सेना परिचालन, होलान त सफल ?
काठमाडौं । राजनीतिमा हरेक असम्भव खेलहरूको सम्भावना हुन्छ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणले पुष्टि गरेको छ । […]
जिल्ला अदालत तीन सातादेखि न्यायाधीशविहीन
साउन २३ । कपिलवस्तु, कपिलवस्तु जिल्ला अदालत तीन साता बित्दासम्म पनि न्यायाधीशविहीन बनेपछि अदालतमा कानुनी […]